Realme GT Neo2, beddel xoog leh oo dhexda ah | Warka Gadget
Realme GT Neo2, beddel xoog leh oo dhexda ah
Miguel Hernández | | Mobiles, Telefoon
Waxaan mar kale kuu soo saarnay badeecada astaanta u ah qiimaha lacagta ee dhawaan timid Spain si ay uga hortagto boqoradda raqiisnimada, Xiaomi. Waxaan u hadleynaa sida aysan si kale u ahaan karin Relame, shirkad ilaalinaysa buug-gacmeedka soo-bandhigista oo ay ka buuxaan warar inkasta oo ay hadda taagan tahay qalalaasaha semiconductors iyo alaabada kale.
Waxaan soo bandhigeynaa Realme GT Neo2 cusub, bilaabistii ugu dambeysay ee shirkadda oo aan si qoto dheer u falanqeynay oo aan tijaabinay si aad u aragto haddii ay runtii calaamadeyn doonto kahor iyo ka dib bartamaha dhexe.
1 Nakhshad iyo agab: Mid lime ah iyo mid ciid ah
3 Multimedia iyo isku xidhka
4 Qaybta sawirka, niyad jab weyn
Nakhshad iyo agab: Mid lime ah iyo mid ciid ah
Marka tan la eego, aan nidhaahno Realme waxay ku sii socotaa wadadeedii hore loo aasaasay, GT Neo2 wuxuu ku dhejiyaa dhabarka si aad ula mid ah kuwii hore, in kasta oo ay siinayso aragtida ah in laga sameeyo dhalo munaasabaddan, taas oo aan keenin in lagu dallaco wireless-ka, sababta oo ah cidhifyada aaladda ayaa ka samaysan baco sidii caadada u ahayd summada ilaa hadda. Aagga hore waxaan ku haynaa guddi 6,6-inji ah oo cusub oo leh cidhifyo dhuuban, laakiin aad uga fog waxa kala duwanaanta badeecadaha kale, gaar ahaan iyadoo la tixgelinayo asymmetry u dhexeeya sare iyo hoose.
Midabada: buluug dhalaalaya, GT cagaaran iyo madow.
Hadda cidhifyo aad u qurux badan, USB-C ayaa lagu soo celinayaa xagga hoose, iyada oo aan lahayn 3,5mm Jack markan, halka aanu ku leenahay badhanka "awoodda" dhinaca midigta iyo badhamada mugga ee bidixda. Waxaas oo dhan waxay na siinayaan cabbirada 162,9 x 75,8 x 8,6 mm iyo miisaan dhan oo taaban doona 200 garaam, Ma fududa in la tixgeliyo in ay ka samaysan tahay caag, waxaan qiyaaseynaa in xajmiga batterigu uu wax badan ku yeelan doono arrintan. Haddii kale, qalab si fiican loo dhammeeyey oo leh palette midab xiiso leh.
Waxaan ku bilownaa dhibcaha ay ugu jeceshahay Realme, xaqiiqda sharadka Qualcomm Snapdragon 870 Waxay ku siinaysaa calaamad wanaagsan oo ah inaadan ku dhaafin awoodda, si aad u xakamayso waxaan haysanaa nidaam kuleyl u gaar ah Realme oo faa'iidooyinkeeda ay horay u soo bandhigeen noocyo badan oo aalado ah. Heerka garaafka, waxaa la socda Adreno 650 ee awoodda la aqoonsan yahay, sidoo kale 8 ama 12 GB ee LPDDR5 RAM iyadoo ku xiran aaladda aan go'aansannay inaan soo iibsanno. Tusaalaha tijaabada ee dib u eegistani waa 8GB ee RAM.
Battery oo ina siiyay in ka badan maalin dhan isticmaalka.
Waxaan haynaa laba ikhtiyaar oo kaydinta, 128 GB iyo 256 GB siday u kala horreeyaan oo leh tignoolajiyada UFS 3.1 oo waxqabadkeedu ka badan yahay inta la xaqiijiyay inuu yahay beddelka kaydinta ugu fiican ee aaladaha Android. Ilaa hadda wax walba waa ku fiican yihiin sida aad arki karto, waxaan haysanaa xasuus wanaagsan, qalab awood leh iyo ballanqaadyo badan, waxaan arki doonaa kuwa la fuliyay iyo kuwa aan la fulin. Xaqiiqdu waxay tahay in qalabku si fudud u socdo wax kasta oo aan hor dhigno, wuxuu kor u qaadaa lakabka shakhsiyeynta, Realme UI 2.0 oo sii wadata inay jiidato taxane ah bloatware oo aynaan ku fahmin aalad leh astaamahan, si kastaba ha ahaatee, waxaan uga takhalusi karnaa si sahlan oo madaxbannaan.
Multimedia iyo isku xidhka
Shaashadda AMOLED ee 6,6-inji ah ayaa taagan, waxaanu haynaa xallinta FullHD oo leh qiime cusub oo aan ka yarayn 120 Hz (600 Hz haddii la taabto qaboojinta). Tani waxay nagu siinaysaa 20: 9 qaab dhalaal wanaagsan (ilaa 1.300 nits oo ah ugu sarreeya) iyo hagaajin midab wanaagsan. Shaki la'aan, shaashadu waxay iila muuqataa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee Realme GT Neo2. Sida iska cad waxaan la soconaa HDR10 +, Dolby Vision iyo ugu dambeyntii Dolby Atmos iyada oo loo marayo "stereo" ku hadla, waxaan dhignaa calaamado xigasho sababtoo ah kan hoose wuxuu leeyahay awood muuqata oo ka weyn kan hore.
Dhanka isku xirnaanta, in kastoo aan macsalaameyno Jack 3,5 mm, Astaanta astaanta (laga yaabee sababta ay ugu dartay qaar ka mid ah Buds Air 2 xirmada saxaafadda). Sida cad waxaan leenahay isku xirnaan Dual SIM ee xogta moobilka, taasoo gaadha xawaarahooda sare 5G sidii la filayey, dhamaantood waxaa la socday Bluetooth 5.2 iyo tan ugu muhiimsan, waxaan sidoo kale ku raaxaysan WiFi 6 Taas oo imtixaanadayda ay ku bixiyeen xawaare sare, waxqabad weyn iyo xasilooni. Ugu dambeyntii raac GPS iyo NFC sidee u noqon kartaa mid kale.
Qaybta sawirka, niyad jab weyn
Kamaradaha Realme wali way ka fog yihiin tartanka, in kasta oo ay geliyaan dareemayaasha ku dayanaya inay weyn yihiin (oo leh muraayado madow oo aad loogu dhawaaqo), waxay aad uga fog yihiin heerka ugu sarreeya ee ay bixiso waxqabadka software-ka guud ahaan. Tani waa marka aad xasuusato in aad ku wajahan tahay aaladda dhexda. Waxaan leenahay dareemaha ugu muhiimsan oo si fiican u difaaca xaaladaha iftiinka wanaagsan, la il daran isbarbardhigga, laakiin si fiican u xasiliya fiidiyowga. Xagasha ballaaran waxay leedahay dhibaatooyin caan ah xagga iftiinka hooseeya iyo sidoo kale isbarbardhigga iftiinka, Macro-ku waa wax-ku-kordhin ah oo aan waxba ka bixin waayo-aragnimada.
Ugu weyn: 64 MP f / 1.8
Xagasha ballaaran: 8MP f / 2.3 119º FOV
Waxaan haynaa kamarad Selfie 16 MP ah (f / 2.5) oo leh qaab qurux badan oo soo jiidasho leh laakiin taasi, si ka duwan kuwa dambe, waxay bixisaa natiijooyin wanaagsan gudaha waxa la filayo. Habka sawirka, wax kasta oo kamaradu isticmaasho, waxay leedahay software faragelin xad dhaaf ah waxayna awood u leedahay inay qabato iftiin aad u yar intii la filayay, markaa isticmaalkeeda laguma talinayo. Waa wax la yaab leh in waxa ugu cajiibsan uu yahay fiidiyowga leh nidaamka Sirdoonka Artificial ee xasilinta, wax aan ogaaday inuu yahay tayada ugu sareysa.
Ilaa inta qaybta sawiradu aanay aad muhiim kuugu ahayn (kiiskan waxaan kugu martiqaadayaa dhamaadka sare) Realme GT Neo2 waxay bixisaa waxqabad wanaagsan iyada oo ay uga mahadcelinayso guddigeeda AMOLED oo leh heerar sare oo cusub, xusuusta UFS 3.1 iyo processor-ka la aqoonsan yahay. , Snapdragon 870. Qaybaha intiisa kale kama soo muuqdaan, mana iska yeelyeelayaan, shay waa terminal oo ka bilaabma qiimaha soo socda:
Qiimaha rasmiga ah:
SOO BANDHIGGA JIMCAHA MADOW (laga bilaabo Noofembar 16 ilaa Noofambar 29, 2021): € 369,99 (8GB + 128GB) € 449,99 (12GB + 256GB).
Waxaa laga heli karaa dukaanka online-ka ah ee realme iyo sidoo kale qaybiyeyaasha rasmiga ah sida Amazon, Aliexpress ama PcComponentes iyo kuwa kale.
Awood weyn iyo xasuus wanaagsan
Qiimaha la hagaajiyay ee la soo bandhigay
Shaashadda wanaagsan ee goobaha oo dib u soo kiciso
Xarigyo aad loogu dhawaaqo
Waxay sii wadaan inay ku sharmaan caag
Codku ma dhalaalayo
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Realme GT Neo2, beddel xoog leh oo dhexda ah
Samsung QLED 4K 2021 TV oo leh qiimo dhimis 32% ah (waxaad kaydisay € 276)
La soco AOC Gaming U28G2AE/BK